Ikhompyutheni yezihloko zeKomishi
Ikhemistikhi yeKholeji yinkcazo ebanzi yezihloko eziqhelekileyo ze-chemistry, kunye nexesha eliqhelekileyo elincinci ye-chemistry kunye ne-biochemistry. Le ncwadana yezihloko zekhompyutheni ongayisebenzisa ukukunceda ukufunda i-khemistri okanye ukufumana ingcamango yento enokuyilindela ukuba ucinga ngokuthatha iikholeji.
Units & Ukulinganisa
Intombazana yobudala 10-12 ifunda umgangatho we-meniscus kwi-beaker. I-Stockbyte, Getty Images
I-Chemistry yenzululwazi encike ekuhlolweni, okuqhelekileyo kuthatha ukuthatha ukulinganisa nokwenza izibalo ezisekelwe kuloo milinganiselo. Oku kuthetha ukuba kubalulekile ukuba uqhelanise neeyunithi zokulinganisa kunye nezindlela zokuguqula phakathi kweeyunithi ezahlukeneyo.
Ukuguqulwa kweMetriki - UkuCima iYunithi
Iinguqu zeGra - Mole
Ukwakhiwa kweAtomic & Molecular
Lo ngumzobo we-athile ye-helium, ene-proton 2, i-2 neutron, kunye ne-electron 2. I-Svdmolen / uJeotot, i-Public Domain
Ii-Atom ziqulethwe iiproton, i-neutron kunye ne-elektroni. Iiprotoni kunye ne-neutron zenza i-nucleus ye-athomu, ngee-elektroni zijikeleza le ngundoqo. Ukufunda isakhiwo se-athomu kubandakanya ukuqonda ukubunjwa kwee-atom, i-isotopes kunye ne-ions.
Isingeniso kwi-Molecular Geometry
Iimali ze-Quantum kunye ne-Electron Orbitals
Oku kukufutshane kwitheyibhile yenkcazelo yezinto, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. UDon Farrall, i-Getty Izithombe
Itheyibhile yenkcazo yindlela echanekileyo yokulungiselela izixhobo zeekhemikhali. Iimpawu zibonisa iipropati ezinokuthi zisetyenziswe ukuxela iziganeko zabo, kubandakanywa amathuba okuba zize zivelise iincube kwaye zithathe inxaxheba kwiimpendulo zamakhemikhali.
Itheyibhile yePeriodic Elements
Isingeniso kwiThebhile yePeriodic
IsiKhokelo soPhulo lwePeriodic Table
Ionic Bond. I-Wikipedia ye-GNU yamaxwebhu e-Documentation License
I-Atom kunye nama-molecule zidibanisa ngokubambisana kwe-ionic kunye ne-covalent bonding. Izihloko ezihambelanayo ziquka i-electronegativity, iinombolo ze-oxidation kunye ne-Lewis ze-electron dot structures.
Ibhetri. Eyup Salman, stock.xchng
I-Electrochemistry ngokukodwa ibandakanyeka ngempembelelo yokunciphisa i-oxyidation okanye i-redox. Ezi mpendulo zivelisa i-ions kwaye ziyakunikwa ukuvelisa i-electrodes neebhetri. I-Electrochemistry isetyenziselwa ukuqikelela ukuba ngaba akukho mpendulo eya kwenzekayo kunye nalapho iinqununu ziza kuhamba khona.
Ukulinganisa i-Redox Reactions
Ukulingana & Stoichiometry
Ukubala kweKemistry kunokuba ngumngeni, kodwa kulula xa udibanisa usebenze imizekelo kwaye ukuba usebenza ukusetyenziswa kweentlobo ezahlukeneyo zeengxaki. UJeffrey Coolidge, i-Getty Images
Kubalulekile ukufunda indlela yokulinganisela ukulingana kunye neemeko ezichaphazela izinga kunye nokuveliswa kweempendulo zamakhemikhali.
Indlela yokulinganisa ukulingana
Izinto ezichaphazela umlinganiselo wezenzo
Umthetho weMilinganiselo emininzi
Ukukhawulelana nokuThengiswa kweeNkcazo
Amanqaku okuThatha iMichiza
Iisombululo kunye nemixube
Kemistry Ukubonakalisa. UGeorge Doyle, Getty Images
Icandelo le-General Chemistry lifunda indlela yokuqwalasela ukubala kunye neentlobo ezahlukeneyo zesisombululo kunye nemixube. Eli nqanaba liquka izihloko ezifana ne-colloids, ukumiswa kunye nokuhlengahlengiswa.
Isisombululo, ukuQinisa, iiColloids kunye nokuHlukana
Indlela yokubala ukugxila
I-Acids, iisiseko kunye ne-pH
Iphepha le-Litmus luhlobo lwephepha le-pH elisetyenziselwa ukuvavanya i-acidity yamanzi asetyenziswayo. UDavid Gould, Getty Images
I-Acids, iziseko kunye ne-pH ziziingcamango ezisetyenziswa kwizixazululo ezinamandla (izisombululo emanzini). i-pH ibhekiselele kwi-concentration ye-hydrogen ion okanye ubuchule bezinto eziza kunika / zamkela iiproton okanye i-elektroni. I-Acids kunye neziseko zibonisa ukutholakala ngokuhambelana kwezixhobo ze-hydrogen okanye i-proton / i-electron abaxhasi okanye abamkeliyo. Izimpendulo ze-Acid-base zibaluleke kakhulu kwiiseli eziphilayo kunye neenkqubo zoshishino.
Iimpawu eziBalulekileyo kunye neZiseko
Uhlolo lwePH olukhawulezayo
Iimpawu ezinamandla kunye neZiseko
I-Thermochemistry / Physical Chemistry
I-thermometer isetyenziselwa ukulinganisa ubushushu. Menchi, i-Wikipedia Commons
I-thermochemistry yindawo yendalo ye-chemistry ehambelana ne-thermodynamics. Ngamanye amaxesha kuthiwa yiPhysistry Chemistry. I-Thermochemistry iquka iingcamango ze-entropy, i-enthalpy, i-Gibbs yamandla akhululekileyo, imeko zeemeko zomgangatho, kunye nemifanekiso yamandla. Kwakhona kuqukwa nophando lokushisa, i-calorimetry, iimpendulo zokuphela komzimba kunye nokuphendula okubuhlungu.
Izimo zeeNqanaba eziMgangatho
Izimpendulo ze-Endothermic & Exothermic
I-Calorimetry & Heat Flow
I-Organic Chemistry kunye ne-Biochemistry
Lo mzekelo wokugcwalisa indawo we-DNA, i-nucleic acid egcina ulwazi lofuzo. Ben Mills
Iimveliso zebhabhoni zekhabhoni zibaluleke ngokukhethekileyo ukufundisisa kuba ezi ziinkampani ezihambelana nobomi. I-biochemistry ibheka iintlobo ezahlukeneyo ze-biololecules kunye nendlela izinto eziphilayo ezakhayo nokuzisebenzisa ngayo. I-chemistry chemistry yinkqubo ebanzi equka ukufundwa kweekhemikhali ezinokuthi zenziwe kwiimolekyuli zendalo.
Iiplini, i-Pyrimidines, i-Nucleosides, i-Nucleotides
Iprotheni kunye nePolpeptipti Structure
Ukushisa koMoya wokuTshintshisa umzekelo Ingxaki
Inkcazo yeNkcazo kunye neMimiselo yeSayensi
Indlela yokubala Ukuzaliswa kwezinto ezibonakalayo zeMicrosoft reaction
Indlela yokusebenzisana nabalingani beLab Bad
Ukuguqula Amakhilogremu Ngama inch square okanye PSI ukuya kumaPascals
Quiz Hydrocarbon Chain Quiz
Lawa yiCallderas enkulu kunazo zonke zehlabathi
I-West Chester University yasePennsylvania Admissions
Ukugqithiswa Kwelishumi kwe-Theravada Buddhism
Indlela iRace and Gender Biases Impact Students in Higher Ed
Njani kwaye Kutheni iGigam iigogo zasekhaya
Amagama aseLatin kunye neMigomo yamaLungu omndeni
Ukuqonda iMimens and Symbols